Nabadoon Caan Ka Ahaa Gobolka Mudug oo Xalay Lagu Dilay Magaalada Gaalkacyo.
Sunday February 10, 2019 - 09:31:29 in Wararka by Wariye Qoslaaye
Kooxo hubeysan ayaa xalay fiidkii Waqooyiga magaalada Gaalkacyo ku dilay nin Nabadoon ahaa, kaasoo si weyn looga yaqaanay deegaanada Puntland.
Nabadoonka la dilay oo lagu magacaabi jiray Cabdi Qani Maxamed Cabdi (Baale) ayaa lagu dhuftay dhowr xabadood xilli uu ka soo baxayay Masaajid uu ku soo tukaday Salaadii cishaha, isagoo ku sii jeeday hoyga uu ka deganyahay magaalada.
Rasaasta lagu dilay Nabadoon Baale waxaa sidoo kale dhaawac uu ka soo gaaray Wiil uu dhalay marxuumka oo xilligaasi la socday, kaasoo xaaladiisa Caafimaad lagu dabiibayo Isbitaalka weyn ee Gaalkacyo.
Ciidamada amaanka oo daqiiqado kadib tagay halka uu dilka ka dhacay ayaa sameeyay howlgal baaritaano ah, inkastoo aan la soo sheegin iney jiraan dad lagu soo qabtay howlgalka, waxaana markii danbe furmay isu socodka gaadiid iyo ganacsiga hareeraha wadada uu dilka ka dhacay.
Waqooyiga magaalada Gaalkacyo ay maamusho Puntland ayaa mararka qaar waxaa ka dhaca dilal qorsheesan oo loo geesto waxgaradka, masuuliyiin iyo sidoo kale dadka shacabka ah ee ku dhaqan, waxaana inta badan baxsada dadka dilalkaasi geesta.
Amniga guud ee magaalada Gaalkacyo ayaa mudooyinkii dambeeyay aheyd mid wanaagsan, wixii ka danbeeyay markii howlgallo ay sameeyeen Ciidamada isku dhafka ah ee ka kala socda maamulada Puntland iyo Galmudug.